2nd Vhidhiyo Yekuchengetedza Varindi Kushungurudza Mudzidzi Na Kuremara
Vhidhiyo yechipiri yakabuda ichiratidza kuratidza weOakland High School gadhi achishungurudza mudzidzi mune wiricheya, uye wechipiri gadhi achaiswa pazororo rinobhadharwa, zviremera zvakati Chipiri.
Marchell Mitchell, ane makore makumi maviri nematatu, akadzingwa basa achipomerwa mhosva yekushungurudza vana nekutyorwa maoko, kurova zvibhakera nekurasa Dora Francisco Martinez wiricheya musi waMay 18 pachiitiko chakatorwa pane kamera yekutarisa yechikoro, akadaro Troy Flint, mutauri weOakland Unified School District.
Imwe Vhidhiyo Inoreva Dzimwe Mari, Mumwe Gadhi Akadzingwa
NeChipiri, vakuru vechikoro vakaburitsa vhidhiyo yechipiri iyo yakabata chimwe chiitiko chakaitika nguva dzapfuura pedyo neelevhi. Vhidhiyo yacho inoratidza inoratidza Martinez achirova ruoko rwemumwe muchengeti, anozivikanwa nedunhu rechikoro saShalandra Cotton, Mitchell akatsamwa akarasira mudzidzi padivi pechigaro chake ndokumurova, zviremera zvakati.
Mitchell anobva adhonzera Martinez muelevhi, uko kukonana kunopfuurira kunze kwekamera kuona.
Wemenduru yegoridhe yeUS Amy Van Dyken anotsemuka musana mutsaona ye offroad